Farmaajo oo Ka Tacsiyadeeyay Geerida Marxuum Qanyare • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Farmaajo oo Ka Tacsiyadeeyay Geerida Marxuum Qanyare
Farmaajo oo Ka Tacsiyadeeyay Geerida Marxuum Qanyare
Madaxweynaha soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyskii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Mudane Maxamed Qanyare Afrax oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
“Innaa Lilaahi Wa Innaa Ilayhi Raajicuun. Waxaan u tacsiyaynayaa qoyskii, qaraabadii iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Marxuum Maxamed Qanyare Afrax. Marxuumku waxa uu qayb weyn ka soo qaatay dadaalladii dib u heshiisiineed ee dalka isaga oo noqday Wasiir iyo Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa Eebbe uga baryay Marxuumka inuu naxariistii Janno ka waraabiyo, qoyskiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodeyna samir iyo iimaan ka siiyo.
Maxamed Qanyare Afrax waxaa uu ka mid ahaa hoggaamiye kooxeedyadii Magaaladda Muqdisho ka taliyaha Sanadihii 90maadkii ilaa bartihii sanadkii 2000. wuxuu xidlhbiaan iyo wasiir ka soo noqdoay xukuumadihi kumeel gaar ah ahaa ee Soomaaliya ka unkamay.